केशव स्थापित किन तानिए विवादमा ? « Pahilo News
केशव स्थापित किन तानिए विवादमा ?
प्रकाशित मिति : 1 November, 2018 4:23 pm
काठमाडौ, १५ कात्तिक । एक महिला कर्मचारीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश–३ सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित फेरि अर्को लफडामा फसेका छन् ।
पछिल्लो लफडाका कारण उनको मन्त्री पद नै धरापमा परेको जानकार बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक अपमानित गरेको भन्दै प्रदेश–३ सरकारले पूर्वाधारमन्त्री स्थापितलाई सरकारबाट हटाउन प्रक्रिया थालेको जनाइएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसामु अभद्र ढङ्गले प्रस्तुत भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रम र सार्वजनिक रुपमै पटक–पटक मुख्यमन्त्रीको अपमान गरेपछि उनलाई हटाउने अनुमतिका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वसँग छलफल शुरु भइसकेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्थापितलाई हटाउने विषयमा छलफल अघि बढाउनकै लागि मुख्यमन्त्री पौडेल र अर्थ तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेल बिहीबार काठमाडौं आउँदै गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेतृत्वसँग यसबारेमा छलफल गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितसँग काम गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला स्थापितले एक महिला कर्मचारीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको आरोप लागेको थियो ।
मी टू अभियान अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाकी पूर्व कर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले स्थापित आफूलाई यौजनजन्य हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । यस्तै अर्की एक पत्रकारले पनि स्थापितले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।